SOMALI THINK TANK » Qalalaasaha Qarsoon ee Qarnigan!!
You are here: Home / Culture, Featured Articles / Qalalaasaha Qarsoon ee Qarnigan!!
Bishii hore waxaa gacantayda soo galay buug ay xiiseeyaan dadka daawada muuqaalada qarsoon ee shaqsiyada qofka. Buuggan wuxuu si cilmiysan u qaadaa dhigayaa qalaalasha qarsoon iyo burburka shaqasiyadeed ee sida dad badan u horseeday isqabqabsiga siyaasadeed, dhaqan iyo dhaqaale ee taagan qarnigan la joogo.
Xogtan waxay barbardhigeen, cilmi baaris kale oo qarnigii dhamaaday bartamihiisa ardayda jaamacadaha maraykanka lagu weydiidyay su’aalo ku saabsan cudurka ” narcissism”. Tusaale ahaan sanadkii 1950 ardayda dhigata jaamacadaha maraykanka boqolkiiba 12% kaliya ayaa aaminsanaa in ay yihiin qataroos la mid ah ina-libaax sanka taabte oo kale. Haddaba labada nin ee qoray buuggan waxay is weydiiyeen sababaha cilmiga ah ee ka danbeeya faafidda cudurka ” narcissism” iyo dhibaatooyinka laga dhaxli karo cudurkan nafsiga ah ee faraha ka baxay.
Magac raadiska joogta ah waxaa laga dhaxlay musuqmaasuq daran oo ku dhacay qaababkii dabiiciga ahaa ee loo qiimayn lahaa shaqsiyada iyo wax qabadka qofka. Tusaale ahaan, aqoonyahannada buuggan qoray waxay ku doodeen in qarnigan bilowga ah la arki doono shaqsiyaad ku mashquulsan raadinta magac iyo manfac aan lagu kasban muruq iyo maskax midna marka la eego musuq- maasuqa socda dartiis. Saadaalintii ragaas dheg jalaq looma siin, balse wixii ka danbeeyay doorashadii Trump, waxaa cadaatay in ragaas ku saxsanaayeen saadaalintii ay aqrisyaasha la wadaageen toban sano ka hor.
Soomaalida kuma badna aqoonyahanno si fiican u bartay cilmi-nafsiga iyo aqoonta cilmiga bulshada kuwaas oo ka sii digi kara qalalaasaha ku qarsoon shaqsiyadda qofka Soomaaliga ah ee nool qarnigan la joogo. Nasiib wanaag Soomaalida waxay leeyihiin abwaano iyo fanaaniin aad uga fiiro dheer ugana horreeya kuwa la midka ah ee ku nool wadamada Afrika.
Tusaale ahaan, fannaaniinta Soomaalida ayaa dhawaan bilaabay riwaayad caan noqotay oo siyaab leh u gudbinaysa fariinta cilmiga ah ee buggan lagu qoray. Qofkii fahma fariinta riwaayada qooto-qooto, uma baahna inuu buugan aqriyo waayo wuxuu si fudud ku fahmay calaamadaha u gaarka ah cudurka nafta isla-dhacsan ee qarnigan la joogo qalaalasha qarsoon ka wada dunida !